Ugari hweMontenegro kune mugove weDurmitor Hotel & Villas
Investment muHotera + Citizenship yeMontenegro
Mumoyo wepaki yakaomesesa yenyika yeMontenegro, iyo Durmitor National Park, padyo neBlack Lake (Crno Jezero),
Durmitor Hotel & Villas yatanga kuvakwa kwenzvimbo yakasarudzika inosanganisira iyo Durmitor Hotel nenzvimbo dzayo.
Ihotera nyowani yeDurmitor ichave yekutanga-nyeredzi shanu-mbiri muZabljak, iyo inozadzikisa zvakanyanya kupa kwevashanyi kumatunhu emakomo.
Kunze kwehotera kuchave kwakafanana neyekare hotera yeDurmitor, yaive chiratidzo chekushanya kwemakomo muMontenegro.
kubva 1939, uye nekudaro ichapa vashanyi vayo mhepo yechokwadi yemakomo pamwe nekunyaradza uye kunyaradza.
Ihotera iyi ichave nemakamuri ekugara makumi mashanu nemashanu, maresitorendi maviri, nzvimbo yekuchengetedza uye nzvimbo yekuporesa, madziva emukati nekunze, imba yekutamba yevana, imba yemusangano uye imba yemusangano.
Zvakare padyo nepadyo nehotera pachavakwa dzimba gumi nenhatu dzemakomo, dzinozopenya nekupenya kweyeredzi shanu.
Kukwezva kwakasarudzika kwenzvimbo yekutandarira inzvimbo yazvinowanikwa, inozivikanwa nekuda kwerunako rwechisikirwo rwechisikigo iyo isingazosiyi chero munhu asina hanya.
Vashanyi kunzvimbo iyi vanozozviwana vava munzvimbo chaiyo yezvinhu zvinofadza zvemakomo, asi kana vachida kuzorora, vanozovewo panzvimbo chaipo kuti vadzike kubva mukushanduka kwehupenyu hwezuva nezuva, kuzorora kubva kuhupenyu hwekukurumidza uye Nakidzwa nerunyararo uye runyararo rwezvakasikwa.
Iyo Durmitor Hotel iri kuchamhembe kweMontenegro mutaundi reZabljak (iro guta rine kukwirira kwakakwirira muBalkans, pakukwirira kwemamita 1450 pamusoro pegungwa) uye ingangoita maminetsi gumi kufamba kubva pagungwa rakanakisa mu
Durmitor National Park - Nhema Nyanza (Crno Jezero).
Mugwagwa weE65 ndiwo mugwagwa unobatanidza Zabljak nedzimwe nzvimbo dzeMontenegro uye ndiwo mugwagwa mukuru unobatanidza gungwa reMontenegro, Podgorica nekuchamhembe.
Imwe yakakosha yekufambisa yekubatanidza mugwagwa unopfuura neShavnik uye Niksic kuenda kuRisan kana Podgorica.
Guta iri zvakare rine yendege yeguta (Zabljak airport), asi nhandare dzenyika dzepedyo ndedzekuti:
Podgorica Airport iri 130 km kure. Kune ndege dzenguva dzose kubva kunhandare iyi kuEurope.
Tivat Airport ndiyo yechipiri padyo nendege uye iri makiromita 170 kure - matatu nehafu maawa nemotokari.
Iyo purogiramu yakagadzirirwa makore matatu, i3 vanyoreri vakaronga.
Tichifunga nezve kuti kuvakwa kweDurmitor Hotel nemisha yakapoteredzwa ndeyekudyara kuchamhembe kwenyika, zvinodiwa nehurumende kubhadhara
iyo huwandu hwe100 euros yekusimudzira + kudyara kwe000 euros (mutengo unosanganisira VAT).
Mukuwedzera, uyo anenge achikumbira anofanira kubhadhara:
15000 euros yekushandisa pachako,
€ 10 yenhengo yemhuri yekuwedzera uye inosvika makumi mana emhuri, uye
50 euros yenhengo yega yega yemhuri inotevera.
Zvikonzero nei uchifanira kunyorera pasipoti yeMontenegro:
Ugari hunowanikwa mukati memwedzi mitanhatu.
Vana vadiki vanogona zvakare kunyorera nemukuru anonyorera.
Iye anenge achinyorera haafanire kusiya hunhu hwake hwazvino.
Kupinda mahara pasina vhiza kunyika gumi nemaviri.
Inonyanya kubatsira nzvimbo yenyika.
Nzvimbo yakanaka yekugara.
Mamwe magwaro ekutanga anodiwa pachishandiswa:
Chitupa chisina rekodhi remhosva;
Zvinyorwa zveakaundi yebhangi;
Yega dhata uye ipfupi yako pachako kutangazve;